उमा सिंहको हत्या अनी ईन्द्र लोहनिको असामयिक निधनले आँखाहरु ओभाउन नपाउदै काठमाण्डौको फोहोरले सबैको नाकमा ढुसी लाग्न थालेको छ । नेताहरु त पजेरोमा हुइकिन्छन, साहु महाजनहरु कारमा सवार त राजा महाराजाहरु दरवारमा । फोहोर गन्हाउने त सडकमा लडेका बेसहरा खाते बालकहरु र जिबिकोपार्जनको लागि रात दिन खट्ने हाम्रा दाजुभाइ-दिदी बहिनिहरुलाई न हो । राजा महाराजाका नाम फेर्न मात्रै ब्यस्त छन, हामीले चुनेर पठाएका "गणतान्त्रिक राजाहरु" । गोर्खाली बिरताको ईतिहास मेट्न शायदै कस्सैले सक्ला तर एकिकरणका मालिकको नाम फेरियो ।
गणतन्त्रको कसम खाएर छातीमा हात राखी भन्नु सक्छौ हामी कि पृथ्वीनारायणको नेपालमा कुनै योगदान थिएन ? यसरी परिबर्तन हुँदै छ नेपाल, नयाँ नेपालको बाटोतिर । प्रचन्डलाई दुई लाख मुल्य पर्ने पलङ फेर्न मन लाग्यो । एकाएक त्यो फेरियो । आज त्रिभुबन विश्वबिद्धालय बन्द छ । त्यसको चापी फेरिएन न त पुस्तकालयमा कुनै पुस्तक फेरियो । महाजनहरुका इच्छा केहीबेरमै परिवर्तन हुन्छ तर काठमाडौंलिहरुले सित्तैमा पाइने स्वच्छ सास पेर्ने सपना कहिले फेरिए होला ?, कर नतिर्ने ब्यापारीहरुका बिज्ञापनका होर्डिङ बोर्डहरु दिनदिनै फेरिन्छन तर सरकार तिनिहरुसँग कर खिचेर फोहोर थन्काउने भाडोहरु किन किन्न सक्दैन ? . हामीले तिरेका करबाट सुनहरु भित्रिन्छन, नेताहरुको लागि । हाम्रा भुँडीमा माड लाग्दैनन नेताहरुलाई बनारसबाट निर्यात गरिएको रसबरी खानु पर्छ । यसरी नेपाली जनताका चाहहरु दिनानुदिन तुशारापात हुँदैछन त नेताका नातेदार्हरुलाई सधैं दशै । महाकाली प्वाल परेको छ त्यसैले देशले लोड्सेडिङमा दिन गुजार्नु परेको छ । मेलम्ची पनि भारततिरै फर्किएर बगेको छ त्यसैले काठमाडौं प्यासमै रमाउनु परेको छ । सगरमाथाको उचाइ घटेको छ अनी बुद्द भारतमै जन्मेका छन त्यसैले हाम्रा ईतिहासअहरु धुजा धुजा भएका छन । नेपालको खाता पाता साउथ ब्लकको दराजमा थन्किएको छ । त्यही हिसाब किताब पल्टाउदै भारतीयहरुले दिने निर्देशनले देशका नेताहरु चलेका छन भने बिकासको आशामा रहेका हाम्रा मनहरुमा हुस्सु लागेर गलेको छ ।
राणाहरुले चुस्न मात्र थालेका थिए आमालाई । पन्चेहरुले आन्द्रा-आन्द्रा लुछे । त्यसपछिका शाहहरुले फोक्सो सम्म लुछ्न सके भने बर्तमानका श्रीहरुले मुटु पनि लुछेर भ्याइसके । अब त बाँकी के नै पो छ र लुछ्नलाई ? हाम्रा हजुरबाहरुले तीन तीन चोटि प्रतिनिधि बनाएर पठाए, आमालाई लुछ्न बाट जोगाउन । तिनिहरु पनि त्यस्तै रहेछन । बानी लागेकाहरुलाई कसरी छुटाउन सकिदो रहेछ र ? फेरी महासङ्राम पछीको खेलबाट हामीहरुले नयाँ जबानहरु पठायौ - आमाको घर, संसदमा । कतिका त हामीले जमानत पनि जफत गर्यौ । तर तिनका बाउ र मामाहरुले तिनलाई लुछ्ने नियुक्ती दिलाए । तिनै जमानत जफतिहरुकै बोलवाला छ अहिले नेपालमा ।
क्सैको जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन, न त कसैको भरोसा । सत्ताको लागि दाजु काटिएको मुलुकमा कसको भरोसा ?, भत्ताको लागी श्रीमतिहरु बेचिने मुलुकमा कसको विश्वाश ?, निती कहिल्यै प्रधान भएन मुलुकमा । नेताका बोलिहरु संबिधानका धाराहरु ठहरिए । कसैले राम्रो कुरो बोलेको नपच्ने, भोलिपल्टै देश कब्जा गर्ने धम्की सुनिन पाइने । राज्यको लागि सुरक्षा दिने सेनाको टकरावको लागि अरु पनि सेना ?, सबै जातिका आफ्ना आफ्ना सेना ? जहाँ कसैको सुरक्षा छैन त्यहा सेनै सेना । अचम्म छ, खेतमा पानी लगाउन गएको भाई फर्केने कुनै भरोसा छैन । साल काट्न बन गएकी बहिनी बलत्कार हुने घटना सामान्य भैसके । तर नेपालमा जसले राजनीति गरे, उनिहरु मात्रै सुरक्षीत छन । तिनका भाई क्याप्टेन, बहिनी हाकिम, श्रीमती सभासद, सालो महाप्रबन्धक अनी साली राजदुत । कपुरी क नजान्ने साँहिलाहरु निती निर्माता । जङल ताकाका सहयोगिहरु सबै रेडियो नेपाल र टेलिभिजनका कर्मचारी । यसरी नै चलाएका छन, श्रीहरुले नयाँ नेपाल । हामीहरु तथास्तु भन्दा अरु केही भन्न सक्ने वाला छैनौ । फेरी भोली गिडिएला भन्ने डर ।
आज जनवरी १९ । मार्टिन लुथरलाई सम्झने दिन । यतिबेला विश्व नतमतस्क छ, समानताको लडेको उनको लडाईं सम्झदै । पि. एच.
डि. को प्रमाण पत्रलाई दराजमा थन्काएर सत्यको राजनीति गरे उनले । उनको बारेमा स्वस्थानी जस्ता धेरै पवित्र लेखानहरु पढ्न सक्छौ हामीले, किनकी दुई हरफमा उनका बलिदानहरु यहाँ उल्लेख गरेर सकिदैन । हामी मात्र यती भन्न सक्छौ कि जनताको मुक्तिको लडाईं लडे उनले । रेलमा काली केटीलाई गोराले गरेको दुर्व्यबहार देखेर मुक्तिको बिगुल फुके उनले । तर तीन करोड हामी नेपाली बेचिएको नाटक टुलुटुलु हेरिरहेका छन, मुक्ती भनाउदो लडाईं लडेको धमास लगाउने - हाम्रा प्रचन्डहरु । कसैको गोलिले जिन्दगी हावामा उडाएपनी मार्टीन लुथरको मुक्तिको लडाईंको सास फेर्छन अमेरिकिहरु । सत्य, समानता र निस्वार्थ उनका निती थिए, उनी लडे सफल भए । उनी मारिए, मरे तर पनि बाचेका छन । यि नेताहरुले हामीलाई लोप्राएपनी हाम्रा सन्ततिहरुले मुक्तिको स्वच्छ सास फेर्न सकुन । काठमाडौं नगनाओस । जय डा. लुथर ! जय मुक्ती !! जय नेपाल !!!